स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशकमा डा.सिंह • Health News Nepal
स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशकमा डा.सिंह
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. दिपेन्द्र रमण सिंहले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार डा.सिंहलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका रहनुभएका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेललाई पनि मन्त्रालयले सरुवा गरेको छ।
उहाँलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको हो । नवनियुक्त डा. सिंहले भने राम्रो काम गरेर अगाडी बढ्ने छु। मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न लागि पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
Tags: #Health and population ministry
पछिल्लो २४ घण्टामा ३३४ संक्रमीत थपिए, कुल संख्या २६३४ पुग्यो #Covid19
विज्ञान प्रविधि युवा पुरस्कार वैज्ञानिक डा. निरञ्जन कोईरालालाई दिने निर्णय